Fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana esofagaly - Proton any California
Miady amin'ny homamiadana esophageal
miaraka amin'ny Precision toa an'i Laser
Therapy fitsaboana ny homamiadana esophageal
Ny teknolojia fanaramaso beam-panodinam-bolo any California Protons dia fomba iray marim-pototra indrindra amin'ny fitsaboana ny famelomana aretin'ny kansera, izay ahafahan'ny dokotera mikendry an-tenda mikitroka esophageal miaraka amin'ny taratra fatra fanafody avo ao amin'ity faritra saro-pady sy fanamby ity.
Raha oharina amin'ny fitsaboana fitsaboana pasifika pasifika taloha kokoa, ny teknolojia scan-vakana ny pensilihazo dia manome ny fikarakarana taratra ho an'ny homamiadana esophageal ao anatin'ny 2 milimetatra ary amin'ny fikarakarana fatratra. Azontsika atao ny mamely ny fivontosan'ny fivontosana amin'ny alàlan'ny fivontosana ary manamaivana ny fihanaky ny vatan'ny taolana mahasalama. Zava-dehibe izany ho an'ireo marary homamiadana esophageal izay nomena fa manakaiky ny fo sy ny havokavoka mifandraika amin'ny esophagus. Ny fatran'ny taratra mahery vaika amin'ireny taova saro-pady ireny dia mety hiteraka pneumonitis taratra, aretin-tratran'ny havokavoka, aretim-po sy tsy fahampiana amin'ny fo. Ny fampihenana ny poizina miady amin'ny taratra dia mampitombo ihany koa ny fahafahan'ny marary mameno ny fitsaboana amin'ny fampiatoana na fanemorana kely kokoa ary manamaivana ny vokatry ny taratra amin'ny esophagus.
Ny carcinoma sela misy sela, izay manomboka amin'ny sela matevina sy manify hita any am-pelatanan'ny esofagus, matetika amin'ny ampahany ambony sy antonony
Adenocarcinoma, izay matetika mipoitra amin'ireo rafitry ny glandula izay manalefaka ny mucus
Arovy ny kibo, ny fo, ny havokavoka ary ny tadin'ny tadidy
Mampihena ny voka-dratsin'ny fitsaboana, ao anatin'izany ny fanaintainana amin'ny mitelina, mie, mandoa, mihena, lanja sy dehydration
Ny famakafakana ny fikarakarana fitsaboana dia manondro fa ny fatra miady amin'ny alàlan'ny esophagus izay alefa any am-po eo an-dàlany dia misy fihenan-kevitra miaraka amin'ny fitsaboana proton beam:
Ny fatran'ny taratra dia nomena am-po miaraka amin'ny taratra X-ray1
Ny fatran'ny taratra dia natolotra tamin'ny fo miaraka amin'ny fitsaboana protes beam1
Soa azo avy amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana esophageal
Ny fitsaboana protonolika mandroso dia mamela ny dokotera handefa onjam-peo avo lenta amin'ny alàlan'ny fivontosan'ny kansera sy hozatra homamiadana, ary mampihena ny fatra amin'ny sela miaro ny sakafo sy ny taova mihantona. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Ny taratra mihena ho an'ny sela mahasalama manodidina ny esophagus dia mety hampihena ny fahasimban'ny fo, ny havokavony, ny vavony ary ny tadiny ary mety hampihena ny aretim-po sy ny aretin'ny havokavoka sy ny fahafatesana. Anisan'izany ny fampihenana ny risika amin'ny fanaintainana ny aretim-pon'ny taratra, ny aretin'ny havokavoka, ny aretim-po ary ny tsy fahombiazan'ny fo.
Ny teknika manokana dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fitsaboana proton mba hikendrena fivontosana mihetsika miaraka amin'ny fametrahana ara-teknika. Zava-dehibe ho an'ny marary homamiadana esophageal izany satria isaky ny mifoka rivotra ianao dia mihetsika ny esophagus anao.
Arakaraka ny sehatra ny homamiadana esophageal, ilaina ny fitsaboana mitambatra amin'ny fomba endoskopika, fandidiana, fitsaboana simika ary taratra dia mety ilaina amin'ny fivontosan'ny esophageal sasany. Ny safidy fitsaboana koa dia voakasiky ny karazan'aretin'ny homamiadana esophageal, taona, ny fahasalamana ankapobeny sy ny safidin'ny tena manokana.
Vokatra fitsaboana &
Ny fitsaboana fitsaboana Proton ao amin'ny California Protons cancer Therapy Centre any San Diego dia mety hanolotra valiny mitovy amin'izany amin'ny taratra X-ray manara-penitra, raha mampihena ny vokatra maharitra sy mampidi-doza mety ho fiainana noho ny fanaintainan'ny taratra, ny aretin'ny havokavoka, ny aretim-po ary ny tsy fahombiazan'ny fo noho ny taratra fahasimban'ny fo sy ny havokavoka. Mety hihena koa ny kansera faharoa any aoriana any noho ny fihenan'ny tara-pahazavana amin'ny sela sy ny taova mahasalama manodidina anao.
Fikarohana fikarohana manohana ny fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadana esophageal
Ny fitsaboana proton novaina intensity dia mampihena ny fihanaky ny taolana ara-potoana mandritra ny fitsaboana azo antoka ho an'ny fivontosana esophageal lavitra eo an-toerana: fandinihana dosimétika
Fitsaboana ny vatan'i Proton sy ny simoteran'ny serasera ho an'ny homamiadana esophageal
Drafitra fikarakarana tomography miendrika efa-taratra ho an'ny fitsaboana taratra miovaova sy fampidirana proton ho an'ny homamiadana esophageal lavitra